18 / 05 / 2018 Levent Ozen လေလံရလဒ်များကို, လေလံပွဲ, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Metro, တူရကီ 0
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန - ရထားရဲ့ဌာနခွဲ 2018 / 7064 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 1.15.120.556,77 TL နှင့် Gebze Darıcaမီထရိုဆောက်လုပ်ရေးနှင့်လြှပျစစျစနစ်များပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတပ်ဆင်ပြီးတော့ကော်မရှင်ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ 2.797.169.355,54 ကုမ္ပဏီများမှဆိုရင် single နှုန်း6၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်. နှင့်ရှိသည်နှင့်ကြောင့်တင်ဒါမနိုင် EZ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ထရေးဒင်း Joint Stock Company ကို + Naka များအတွက်ရထားစနစ်များ + Met ရက်ကြာဆောက်လုပ်ရေးစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုကြသောစျေးကွက် meting 2.488.489.457,00 လေလံ£။ Taah ။ စန်း။ Tic.Ltd.Şti။ + Gokce inş.taah.tic.vစက် san.ltd .Ştiဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကဖက်စပ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
Medi-Day ကိုရထားစနစ်များ + အဆောက်အဦး + ဆောက်လုပ်ရေး + Gokce İNŞ.TAAH Eze meting 1- ။ £ 2.488.489.757,00
2- Makyol ဆောက်လုပ်ရေးဆောက်လုပ်ရေး 2.539.998.621,00 + IC Ictas + £ Astur
တူရကီဆောက်လုပ်ရေးဆောက်လုပ်ရေး METROSTAV Dalgıçray 3- + + ပုံရိပ်ကို Fernas ဆောက်လုပ်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံ£ 2.588.008.210,00
DBH လမ်းဆောက်လုပ်ရေးGÜRBAĞ 4- + + 2.690.000.000,00 နှုန်း Teba Yedigoze ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာစွမ်းအင် + Ohit
ကျေးဇူးတင်ပါသည် 5- Cengiz ဆောက်လုပ်ရေး + SSC လမ်းဆောက်လုပ်ရေး
6- GülermakDoğuşဆောက်လုပ်ရေးအဆောက်အဦး + ဆောက်လုပ်ရေး + Nuhoğluကျေးဇူးတင်ပါသည်
တင်ဒါအပိုငျးပိုငျးဘူတာရုံရှည်လျားမီထရိုလိုင်း Gebze Darıcaပြီးတော့သိုလှောင်ဧရိယာဆောက်လုပ်ရေးနှင့်လြှပျစစျစနစ်များပစ္စည်းဝယ်ယူရေး, တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ကော်မရှင်အဖုံးများအလုပ်လုပ်တယ်အကြောင်းကို 12 15,6 ကီလိုမီတာရှိပါတယ်။ ပေးပို့အလုပ် 1560 (တဦးတည်းထောင်ငါးရာခြောက်ဆယ်) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းထံမှကြာချိန်။
Gebze Darıca Metro ကြီးကြပ်အင်ဂျင်နီယာနှင့်အတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးရလဒ်များ 18 / 05 / 2018 အဆိုပါသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Gebze Darıcaမီထရိုဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အင်ဂျင်နီယာများ၏လြှပျစစျအလုပ်လုပ်ကြီးကြပ်ရေးနှင့် Consultancy Services မှပစ္စည်းဝယ်ယူရေးယောဘသည်နှုန်း 2018 အကြောင်းကိုကုန်ကျသောရထားစနစ်များတိုင်း 69827 / 48.980.598,77 JCC အရေအတွက်၏ဥက္ကဋ္ဌဦး၏အင်ဂျင်နီယာများ၏ Gebze Darıcaမီထရိုဆောက်လုပ်ရေးနှင့်လြှပျစစျအလုပ်လုပ်ကြီးကြပ်ရေးနှင့် Consultancy Services မှပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစီးပွားရေးပစ္စည်းဝယ်ယူရေးရလဒ်များ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှအတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ကတင်ဒါကြီး539.470.927,21 လေလံနှုန်းလေလံACARDİS Engineering Nederlands + TÜMAŞတူရကီဖက်စပ်အနိုင်ရထားပြီးတစ်ခုတည်းကုမ္ပဏီထုတ်။ Gebze နှင့် Darica ရေနံအကြားကန်ထရိုက်အတွက်အကြမ်းဖျင်းအတွက် 15 ကီလိုမီတာရှည်လျားဥမင်လိုဏ်ခေါင်းပါရှိသော။ , Drilling, On-ချွတ်အမျိုးအစား။ ဘောလုံးကို။ 12 နှင့်အတူစုစုပေါင်းဘူတာရုံ ...
Gebze Darıcaမီထရိုလိုင်း၏ဆောက်လုပ်ရေးများအတွက်တင်ဒါကျင်းပခဲ့သည် 18 / 05 / 2018 Gebze နှင့်Darıcaအကြားမြေအောက်ရထားလိုင်းကိုဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်ခြင်းဖြင့်ကျင်းပလိမ့်မည်သည့် Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တင်ဒါ။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးတင်ဒါအထွေထွေ Mustafa Altai နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနAyşegül Yalcinkaya ကိုလည်းစောင့်ကြည့်စည်းဝေးပွဲခန်းမဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ်အတွက်ကျင်းပခဲ့တယ်။6ကုမ္ပဏီများကသူတို့ကိုကျေးဇူးတင်စကားစာတစ်စောင်ပို့ခြင်းနူးညံ့သောစာအိတ်ပူဇော်ကြ၏။ လေးကုမ္ပဏီများမှ Gebze Metro ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်လေလံတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ရထားစနစ်များ + Met ရက်ကြာ Ins + EZ Ins + Gokce အမြင့်ဆုံးလေလံ meting2ဘီလီယံခန့် 488 သန်း 489 တထောင်နှင့်အတူတင်ဒါနိမ့်ဆုံးလေလံ2ဘီလီယံခန့် 690 သန်း DBH လမ်းမကြီး + GÜRBAĞ Ins + Yedigoze Const ။ + Teba စွမ်းအင်မိတ်ဖက်များနှင့်မိတ်ဖက်တည်ဆောက်ခြင်းမှ လာ. သူကိုပေး၏။ 15.6 ကီလိုမီတာတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မြောက်အမေရိက-Gebze Gebze Darıcaရောဂါ-လိုင်းအလင်းရထားစနစ်စစ်တမ်း Project မှန်ဆောင်မှုများအဘို့ကိုယူပါလိမ့်မည် 10 / 06 / 2015 Gebze မြောက်အမေရိက-Gebze ရောဂါ-Darica အလင်းရထားစနစ်စစ်တမ်း Project မှန်ဆောင်မှုများ 4734 အမှတ် 19 ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုငှားရမ်း Pre-ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှု Gebze မြောက်အမေရိက-Gebze ရောဂါ-Darica LRT လိုင်းပြင်ဆင်မှုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာနရထားလမ်းစနစ်ဦးစီးဌာနလိုင်း KOCAELI စည်ပင်သာယာအဘို့ကိုယူပါလိမ့်မည် ဒါဟာအေးဂျင့်အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 67985 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: အဆိုပါအရာရှိ '' ကလပ် Sekar အဘိဓါန်အုပ်ချုပ်ရေးအဆောက်အအုံİzmit / Kocaeli ခဆန့်ကျင် D-100 လမ်းကျော်) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2623242260 - 2623172605 ဂ) e-mail လိပ်စာ : ihale@kocaeli.bel.tr ...
မြောက်အမေရိက Gebze - Gebze ဘူတာ - တင်ဒါပြင်ဆင်နေ၏အဆိုပြုချက်ကို၏ Darica အလင်းရထားလိုင်းစီမံကိန်းအကြို-ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုစုဆောင်းခဲ့ကြ 09 / 07 / 2015 အစ္စတန်ဘူလ် BB Gebze မြောက်အမေရိက - Gebze ဘူတာ - Gebze ဘူတာ - - Pre-ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှု Darica LRT လိုင်းအဘိတ်တင်ဒါ၏ပြင်ဆင်မှုအဘို့အအဆိုပြုချက်ကို၏ Darica အလင်းရထားလိုင်းစီမံကိန်းအကြို-ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှု Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနရထားရဲ့ဘဏ်ခွဲ, "Gebze မြောက်အမေရိကစုဆောင်းခဲ့သည် "နုကမ်းလှမ်းမှုကိုဇူလိုင်လ 02 2015 ရက်အတွင်းစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, 347.000 အောက်ပါအတိုင်း£ 1 ကုမ္ပဏီများနှင့်လေလံအကြောင်းကိုသတ်မှတ်ထားသောကုန်ကျစရိတ်များအဖြစ်တင်ဒါ (TL) တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်။ Bosphorus စီမံကိန်း 295.0002။ Proyap အင်ဂျင်နီယာ 540.000 ကိုးကားစရာ: ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 1237 / 15 2015 ဇွန်လ (EE)
မြောက်အမေရိက Gebze - Gebze ဘူတာ - နူးညံ့သောစီမံကိနျး၏ပြင်ဆင်မှု၏ Darica အလင်းရထားလိုင်းစီမံကိန်းအကြို-ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှု Bosphorus အနိုင်ရ 30 / 07 / 2015 Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Gebze မြောက်အမေရိက - Gebze ဘူတာ - Gebze ဘူတာ - - Darica Bogazici စီမံကိန်းသည် Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနရထားစနစ်များဌာနခွဲညွှန်ကြားမှု 02 ဇူလိုင်လ 2015 တစ်ရက်ဟာယပူဇော်သက္ကာစုဆောင်းအနိုင်ရ "Gebze မြောက်အမေရိက၏နူးညံ့၏ Darica အလင်းရထားလိုင်းစီမံကိန်းအကြို-ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုပြင်ဆင်မှု Pre-လေ့လာမှု၏ LRT လိုင်းအဘိတ် "တင်ဒါရလဒ်သိရသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, အဆိုပြုချက်ကိုနှုန်းစီမံကိန်းကိုလျင် 347.000 295.000 အဖြစ်ဖော်ထုတ်နု၏အနီးစပ်ဆုံးကုန်ကျစရိတ် Bosphorus အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခံရဖို့ဥပဒေကာလပြီးဆုံးပြီးနောက်။ လူသိများသည်အတိုင်း, အခြားကုမ္ပဏီများတင်ဒါ Proyap အင်ဂျင်နီယာပါဝင် ...